‘मेरी मामु’ फ्लोरमा, छायांकनस्थलमा मेस्सी र रोनाल्डोदेखि ६ लाखको कुकुरसम्मको यस्तो चर्चा (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment‘मेरी मामु’ फ्लोरमा, छायांकनस्थलमा मेस्सी र रोनाल्डोदेखि ६ लाखको कुकुरसम्मको यस्तो चर्चा (भिडियो)
June 18, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News 0
आसुसेन फिल्मस् प्रालिको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको फिल्म ‘मेरी मामु’ को छायांकन आजबाट सुरु भएको छ । यसअघि ‘प्रेमगीत’ र ‘प्रेमगीत–२’ जस्ता सफल फिल्मका निर्माता सन्तोष सेनले यो फिल्मको निर्माण थालेका हुन् । यसअघि ‘राज्जा रानी’ तथा ‘हुर्रे’ को निर्देशन गरिसकेका याम थापाले निर्देशन गर्न लागेको यो फिल्म बालमनोबिज्ञानमा आधारित रहेर निर्माण थालिएको हो । फिल्ममा निर्माता सेनकै ६ बर्षिय छोरा आयूब सेनको मुख्य भूमिका रहने छ ।
आजबाट छायांकान सुरु भएको यो फिल्मलाई फिल्मलाई भदौ १५ गते यानेकि अढाई महिनामा दर्शकमाझ ल्याउने निर्माण टिमले जनाएको छ । यो पक्कै पनि चानचुने कुरा भने होईन । यो फिल्ममा केही रोचक पक्ष पनि रहेका छन् । यतिबेला विश्वभर नै फुटवलको कुम्भ मेला ‘वल्र्ड कप’ ले छपक्कै छोपेको समय हो । संयोग मान्नुपर्छ आजदेखि छायांकन सुरु भएको फिल्ममा अहिलेका विश्वकै चर्चित फुटवल खेलाडी रोनाल्डो र मेस्सी पनि रहेको बताईएको छ । को हुन त आखिर तिनिहरु ? त्यति मात्रै होईन यो फिल्ममा एउटा कुकुरको पनि अभिनय रहेको छ । विदेशबाट ल्याईएको त्यो कुकुर नेपालसम्म ल्याउदा करिब ६ लाख खर्च भएको निर्माण टिमले जनाएको छ । निर्माता सन्तोषले आफ्नो ६ बर्षको छोरालाई हिरो बनायो भन्नेहरुलाई निर्माता सेनले जवाफ गतिलै दिएका छन् । उनले प्रश्न गरे ? डाक्टर इन्जिनियरले आफ्ना छोराछोरीलाई आफू जस्तै बनाउन खोजे जस्तै मैले पनि करिब ६/७ महिना छोरालाई मण्डला थियटरमा ट्रेनिङ गराएर फिल्म खेलाउदा के बिराए र ? नामैले प्रष्ट पार्छ यो फिल्मले एक छोरा र आमाको कथा बोल्छ । ६ महिना लामो अभिनय कोर्ष पश्चात् निर्माता सेनले छोरालाई फिल्ममा लिएका हुन् ।
आयूबकी आमाको भूमिकामा कुसुम गुरुङ देखिदैछिन् । कुसुमले यही फिल्मबाट नेपाली रजतपटमा डेब्यू गर्दैछिन् ।यही फिल्मका लागि कुसुमले एक थिएटरबाट अभिनयमा तीन महिने प्रशिक्षण लिइसकेकी छिन् । यसअघि उनले सुनिल पोखरेल निर्देशित ‘हरियो ढुंगा’ नामक नाटकमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । निर्देशक थापा आफैंले यो फिल्मको कथा लेखेका हुन् । फिल्मको कथा बाल मनोविज्ञानमा आधारित रहेको छ ।
यस्तो देखियो ‘भैरे’ को ट्रेलर, दयाले सुरक्षा रोजेपछि बुद्धिले रोजे बर्षा (ट्रेलर)